20 Shaqooyinka Caafimaadka ee Ugu Lacag Badan oo leh Iskuul yar 2022
Mawduucan 'blog' wuxuu ku siinayaa macluumaad ku saabsan shaqooyinka caafimaad ee ugu mushaharka badan iskuulo yar, taas oo ah, uma baahnid inaad ku dhex marto dhibaatada adag ee iskuulka med si aad u hesho shaqooyinkan. Waxbarasho yar, oo sida muuqata la xiriirta qeybta caafimaadka, waxaad ka heli kartaa shaqooyin caafimaad.
Maaddaama dad badani ay rabaan inay aadaan dugsiga caafimaadka oo ay noqdaan xirfadle caafimaad oo shati leh, haddana qof walbaa weli ma geli karo dugsiga caafimaadka sababo kala duwan awgood. Waxay noqon kartaa tartan ama qiimo sare, sidaad horeyba u ogayd, barnaamijyada caafimaad waxay kamid yihiin koorsooyinka ugu qaalisan ee wax lagu barto.
Si kastaba ha noqotee, haddii aadan awoodin inaad gasho dugsiga caafimaadka si aad u fuliso riyadaada ah inaad noqoto dhakhtar xirfadle ah waxaa jiri kara waddo kale. Hagaag, marka hore, haddii aadan awoodin inaad gasho iskuulka med med waxaad badbaadiyey naftaada culeyska la socda iyo sidoo kale kharashaadka.
Hagaag yaan dhahno riyadiina gebi ahaanba waa la jarjaray, haddii ay runti ahaan laheyd markaa dhib kuma qabeen qorista iyo daabicida maqaalkan, wali waadna ku horumari kartaan dhanka caafimaadka. Waxaa jira dhowr siyaabood oo aan adag oo aan qaali ahayn oo lagu galo goobta caafimaadka waxaana looga hadlay maqaalkan.
Waad kaqeyb geli kartaa bulshada ama kuliyadaha farsamada si aad uhesho shahaado, diblooma, ama shahaadada jaamacadeed ee barnaamijyada kale ee caafimaadka sida codeynta caafimaadka iyo biilasha, kaaliyaha caafimaadka, iwm oo aad dhameystiri laheyd inta udhaxeysa 9 bilood ilaa 2 sano.
Eeg? Waqti uma qaataan inay dhammaystiraan, sidoo kale, ma ahan kuwo adag, waa kuwo jaban, oo waxay bixiyaan qaddar macquul ah oo mushahar sannadle ah. Sidoo kale wali waad galeysaa inaad kujirto qeybta caafimaadka, arag, wali waxaad kuxirantahay waxaad jeceshahay, khibrada aad kaheli laheydna waxay noqon kartaa mid kalifta inaad kuhesho iskuulka caafimaadka ugu dambeyntiina aad noqotid dhakhtar shati sidii aad waligaa rabtay.
Sikastaba, haddii tani aysan wax xiriir ah la lahayn adiga oo doonaya inaad gasho goobta caafimaadka oo aad rabto kaliya shaqo deg deg ah oo kugu aqbali doonta wax yar oo dugsi ah, ka dibna sii wad aqriska, waxaa laga yaabaa inaad u aragto qoraalkan baloog waxtar leh. Laakiin markaa, shaqooyinka halkan ka jira waxay la xiriiraan caafimaad laakiin waxaad si dhakhso leh u baran kartaa waxa jira oo dhan, waxaad bilaabi kartaa shaqada, waxaadna bilaabi kartaa inaad nolol wanaagsan ku noolaato inta u dhexeysa 1 sano ama xitaa ka yar.
Waxyaabaha kale ayaa ah, shaqooyinka caafimaadku waxay ka mid yihiin shaqooyinka mushaharka badan leh meel kasta iyo xaqiiqda ah inaadan u baahnayn shahaadada bachelorka shaqooyinkan waxay iyaga ka dhigeysaa xitaa kuwo xiiso badan oo doonaya inay galaan. Goobta daryeelka caafimaadku had iyo goor way sii kordheysaa oo haddii aad leedahay wax xirfado ah oo la xiriira gabi ahaanba, waxaad si otomaatig ah u tahay baahi sare.
Marka, halkan waxaa lagu soo ururiyey liiska iyo faahfaahinta shaqooyinka caafimaad ee ugu mushaharka badan iskuulo yar oo ay tahay inaad xirfad ku yeelato, ku kasbato shahaadadaada, kuna shaqaysato warshadaha daryeelka caafimaadka.
1 Shaqooyinka Caafimaadka ee Ugu Lacagta Badan Iskuulada yar
1.1 1. Kaaliyaha Caafimaadka
1.2 2. Xoghayaha Caafimaadka
1.3 3. Dhakhtarka shucaaca
1.4 4. Kaaliyaha Ilkaha
1.5 5. Farsamayaqaan Farmashiyaha
1.6 6. Teknolojiyadda Daawada Nukliyeerka
1.7 7. Farsamo yaqaan Phlebotomy
1.8 8. Qorayaasha Caafimaadka
1.9 9. Sonographer'ka cilmiga baaritaanka
1.10 10. Farsamo yaqaanada Caafimaadka Degdega ah (EMT)
1.11 11. Kaaliyaha Daaweynta Jirka
1.12 12. Dib-u-habeynta Qalabka Caafimaadka
1.13 13. Farsamo yaqaan Shaybaarka Daawada
1.14 14. Teknolojiyada Qalliinka
1.15 15. Kalkaaliyaha Diiwaangashan
1.16 16. Khabiirka Codaynta Caafimaadka
1.17 17. Maamulaha Daryeelka Caafimaadka
1.18 18. Kaaliyaha Caafimaadka Guryaha
1.19 19. Farsamo yaqaan Macluumaadka Caafimaadka
1.20 20. Nafaqeeye
Hoos waxaa ku taxan oo lagu sharaxay shaqooyinka caafimaad ee ugu mushaharka badan iskuulo yar iyo mushaharkooda celceliska sanadlaha ah:
Teknolojiyada Daawada Nukliyeerka
Farsamaynta Farsamaynta Phlebotomy
Dhakhaatiirta Diiwaangelinta Caafimaadka
Dayactirka Qalabka Caafimaadka
Farsamayaqaan Sheybaarka Caafimaadka
Kalkaaliye caafimaad oo diiwaangashan
Khabiirka Koodhka Caafimaadka
Maamulaha Daryeelka Caafimaadka
Kaaliyaha Caafimaadka Guriga
Farsamada Macluumaadka Caafimaadka
1. Caawiye Caafimaad
Kaaliyaha caafimaadku waa mid ka mid ah shaqooyinka caafimaad ee ugu mushaharka badan iskuulaad yar waana u fududahay sida loogu dhawaaqo, shaqadaadu waa inaad si fudud u caawiso dhakhtar isbitaal ama rug caafimaad. Badiyaa waa dadka ugu horreeya ee bukaanku la kulmo markay isbitaal gaaraan.
Waajibaadka kaaliyaha caafimaadka waxaa ka mid ah hubinta calaamadaha muhiimka ah ee bukaanka, qaadashada iyo xafidaada diiwaanka taariikhda caafimaad ee bukaanka, u sharxida hababka daaweynta bukaanka, barashada bukaanada ku saabsan daawooyinka iyo cuntooyinka, ururinta iyo diyaarinta baaritaanada shaybaarka, iwm.
Waad ku laadi kartaa shaqo bilow ah arimahan adoo ka helaya shahaado ama shahaadada jaamacadeed kuliyada bulshada dhawaana waxaan daabacay qoraal ku saabsan sida loo noqdo kaaliye caafimaad. Celceliska mushaarka kaaliyaha caafimaadka waa $ 36,542 sanadkii.
Miyaad xiiseyneysaa inaad ku qaadato barnaamijkan khadka tooska ah? Riix halkan
2. Xoghayaha Caafimaadka
Iyada oo celcelis ahaan mushahar sanadle ah $ 32,653, Xoghayaha Caafimaadka waa mid ka mid ah shaqooyinka caafimaad ee ugu mushaharka badan iskuulo yar. Hawsha halkan ku taal waxay u egtahay ta caawiye caafimaad laakiin markan waxaad la tacaali doontaa doorka maamul laakiin weli waxaad haysataa xoogaa aqoon caafimaad ah.
Hawlaha ku lugta leh shaqadan waa samaynta ballamo, ka jawaabidda wicitaannada taleefannada, xisaabinta, diyaarinta warbixinno caafimaad iyo qaansheeg, qorista farriimaha, iyo ka shaqeynta biilasha iyo waraaqaha caymiska. Waad kasban kartaa xirfadahan markaad u aadayso shahaadada jaamacadeed ama shahaado.
3. Daaweynta shucaaca
Shaqadani aad ayey uga horumarsan tahay labadii hore waxayna ku timid celcelis ahaan mushahar dhan $ 80,570 sanadkii taasoo ka dhigaysa liiska shaqooyinka caafimaad ee ugu mushaharka badan iskool yar. Shucaaca waxaa loo isticmaalaa raajada iyo daaweynta cudurada qaarkood sida kansarka oo aad ka daaweyn doonto bukaanada.
Waxaad kuheli kartaa xirfadaha lagama maarmaanka ah adoo kaqeybgalaya kulleejada bulshada waxaana laga yaabaa inaad ubaahantahay inaad ku kasbato shahaadada jaamacadeed midkaan.
4. Kaaliyaha Ilkaha
Si ka duwan kaaliyaha caafimaad ee umuuqda mid guud, kaaliyaha ilkaha ayaa si toos ah u toos ah waxaadna ku shaqeyn doontaa kormeerka dhakhtarka ilkaha oo shati haysta. Adiga ayaa mas'uul ka noqon doona isku darka howlaha ilkaha iyo maamulka ee ay ka mid yihiin diyaarinta iyo dayactirka aaladaha dhakhtarka ilkaha, abaabulka diiwaanada bukaanka, qorsheynta ballamaha, iyo wixii la mid ah.
Waxay u egtahay hawl la mid ah kaaliyaha caafimaadka laakiin xaaladdan, waxaa lagu tababbari doonaa laguna qalabeyn doonaa xirfado la xiriira qaybta ilkaha ee daawada iyo sida loo caawiyo dhakhaatiirta ilkaha. Inaad noqoto kaaliyaha ilkaha waa mid ka mid ah shaqooyinka caafimaad ee ugu mushaharka badan iskool yar, waxaad heli kartaa shahaado ama shahaado la mid ah.
Celceliska mushaarka sanadlaha waa $ 36,542
5. Farsamayaqaan Farmashiyaha
Farmashiyahu sidoo kale waa qayb kale oo daawo ah farmashiyayaashuna waxay u baahan yihiin caawiyeyaal si ay uga dhigaan hawl maalmeedkooda mid aad u fudud. Waxaad ku bilaabi kartaa xirfad shaqo halkan adigoo xaadiraya kulliyad bixisa barnaamijka, aad xirfad u yeelatid, shahaado hesho, oo aad bilowdo inaad u shaqeyso farsamo yaqaan farmashiye.
Mushaharkoodu waa celcelis ahaan $ 34,000 sanadkiiba taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah shaqooyinka caafimaad ee ugu mushaharka badan iskuulo yar. Hawlaha ku lugta leh noqoshada farsamayaqaan farmashiye waxay gacanta ku hayaan qorista iyo codsiyada dib-u-buuxinta bukaanka, ilaalinta sirta bukaanka, bixinta adeegga macaamiisha, u sharraxidda daawooyinka bukaanka, iyo ka shaqeynta biilasha iyo caymiska.
6. Tiknoolajiyadda Daawada Nukliyeerka
Waad igu raaci laheyd in shaqadani ay tahay mid gebi ahaanba ka baxsan oo ay tahay inay lahaato mushahar aad u sareeya marka loo eego kuwa kale. Hagaag, waa nooc ka sareeya. Ugu badnaan $ 75,660 mushahar sanadle ah waa mid ka mid ah shaqooyinka caafimaad ee ugu mushaharka badan iskuulo yar isla markaana shahaadada jaamacadeed waxay ku siin doontaa xirfadaha lagama maarmaanka u ah inaad shaqada qabato.
Hawlaha waxaa ka mid ah diyaarinta daawooyinka shucaaca leh iyo u maamulidda bukaannada, qaadista baaritaannada, iyo u sharraxidda daryeelka shakhsi ahaaneed ee bukaannada.
7. Farsamo yaqaan Phlebotomy
Farsamo yaqaanada Phlebotomy waa mid ka mid ah shaqooyinka caafimaad ee ugu mushaharka badan iskuulaad yar, waad laad laaban kartaa inaad bilowdo xirfad aad ku dhex leedahay tababarka shaqada ama shahaado laakiin haddii aad rabto aqoon ballaadhan markaa waa inaad doorataa shahaadada jaamacadeed. Celceliska mushaharku waa $ 37,356 sanadkii.
Hawlaha waxaa ka mid ah sawir ka qaadista dhiigga bukaanka baaritaanka shaybaarka, ku deeqaha dhiigga, iyo gelinta xididdada xididka. Xirfaddan, waxaad ka shaqeyn kartaa bangiyada dhiigga, xarumaha baarista, iyo goobaha kale ee daryeelka caafimaadka.
8. Qorayaasha Caafimaadka
Dugsi aad u yar ayaa looga baahan yahay booskan shaqadan mushaharkuna sidoo kale wuu sarreeyaa, celcelis ahaan $ 36,000 sanadkii. Shaqadu waa mid fudud oo cayiman laakiin wali waxaad u baahan tahay inaad barato sida saxda ah ee loo sameeyo iyo kaqeybgalka kulleejada bulshada si loo sii wado barnaamijka waxay umuuqataa xulashada ugu fiican.
Mas'uuliyadaha qoraallada caafimaad waxaa ka mid ah adeegsiga aaladaha elektiroonigga ah si loola socdo warbixinnada caafimaad, si taxaddar leh loo dhagaysto codadka dhakhaatiirta, kalkaaliyeyaasha, iyo kuwa kale ee ka shaqeeya warshadaha daryeelka caafimaadka iyo qorista waxa la sheegayo, tarjumaadda soo gaabinta caafimaadka, iyo wax ka beddelka. qabyo ah oo ay bixiso barnaamijka aqoonsiga hadalka.
9. Sonographer-ka Cilmi-baarista Cilmiga
Iyada oo celcelis ahaan mushahar sanadle ah $ 62,000, Sonographer Medical Diagnostic waa mid ka mid ah shaqooyinka caafimaad ee ugu mushaharka badan iskuulo yar.
Sawir-qaade caafimaad oo lagu baaro waa midka sameeya baaritaanno sawirro ah oo lagu qaadayo bukaannada muujinaya waxa ka dhacaya qaybtaas shaashadda ah. Mas'uuliyadaha kale waxaa ka mid ah in la qaato taariikhda caafimaad ee bukaanka ka hor inta aan la baarin oo laga jawaabo wixii su'aalo ah ee ay qabaan.
10. Farsamo yaqaanada Caafimaadka Degdega ah (EMT)
Kuwani waa ragga ka jawaaba xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka sida wicitaanada 911 waxayna sidoo kale siiyaan gargaar caafimaad oo degdeg ah bukaannada. Adiguna sidoo kale waxaad la mid noqon kartaa wax yar oo shahaado ah ama shahaado wadaag ah si aad u horumariso aqoontaada si ballaaran.
Iyada oo celcelis ahaan mushahar sanadle ah $ 39,656 sanadkiiba, EMT waa mid ka mid ah shaqooyinka caafimaad ee ugu mushaharka badan iskuulo yar.
11. Kaaliyaha Daaweynta Jirka
Celceliska mushaarka sanadlaha ah ee kaaliyaha jimicsiga jirka waa $ 52,000, waa mid kamid ah shaqooyinka caafimaad ee ugu mushaharka badan iskuulaad yar waxaadnaheli kartaa inaad heshid shahaado labo sano ah oo lagu shaqaaleeyo booskan shaqadan.
Kaaliye dabiibka dabiibka ah, shaqadaadu waa inaad ka caawiso bukaanada inay gaaraan yoolalka awooda jir ahaaneed ka dib dhaawac jireed sida shil ama dhaawac jirka ah. Adiga oo ku hoos shaqeynaya hagista dhaqtarka jirka, waxaad ka caawin doontaa bukaanada in ay ka bogsadaan xanuun waqti dheer ah qorshe koritaan gaar ah waxaana jira wax badan oo hal-hal ah oo bukaanka ah.
Mas'uuliyadaha kale waxaa ka mid ah:
Ka caawi jimicsiga adag
Haysashada diiwaanka horumarka bukaanka
Nadiifinta guud iyo dayactirka
La soco xaalada bukaanada iyo horumarka ay mudada ku jiraan
12. Dib-u-habeynta Qalabka Caafimaadka
Qalabka loo isticmaalo goobta caafimaadka badanaa wuxuu soo saaraa arimo wuxuuna u baahan yahay in la hagaajiyo lana ilaaliyo, hada, waxaa jira dad gaar ah oo loo tababaray lana qalabeeyay xirfado ay ku dayactiraan qalabka caafimaadka, dadkani waa qalabka dayactirka qalabka caafimaadka.
Qaadashada xirfaddan, waxaad dayactiri doontaa waxyaabo u dhexeeya socod fudud ilaa mashiinno adag sida mashiinnada MRI. Tani waa mid ka mid ah shaqooyinka caafimaad ee ugu mushaharka badan iskuulo yar oo dhigta $ 58,820 waxaadna ku kasban kartaa xirfadaha adoo qaadanaya shahaado ama shahaadada jaamacadeed.
13. Farsamo yaqaan Shaybaarka Daawada
Farsamo yaqaan shaybaar caafimaad ama sheybaar ayaa ah mid ka mid ah shaqooyinka caafimaad ee ugu mushaharka badan iskuulaad yar, howshu waxay ku lug leedahay sameynta tijaabooyin iyo falanqaynta shaybaarrada sida dheecaannada jirka, nudaha, iyo shaybaarada kale. Xirfadahaaga, oo aad ku kasban karto shahaado ama shahaado wadaag ah, waxaad ka shaqeyn kartaa xarumaha baarista, isbitaalada, iyo sheybaarada caafimaadka.
Celceliska mushaharku waa $ 44,574 sanadkii.
14. Teknolojiyada Qalliinka
Khabiir ku takhasusay qalliinka ayaa la kulmaya sida qalliinka nolosha dhabta ahi u eg yahay iyada oo aan loo sii marin tobanka sano ee tababarka caadiga ah. Shaqadaadu waxay ka kooban tahay nadiifinta iyo diyaarinta qolka qalliinka, nadiifinta iyo abaabulka qalabka, keydinta iyo dalbashada sahayda caafimaadka, iyo caawinta dhakhaatiirta qalliinka inta lagu jiro hawlgallada.
Si aad u bilowdo xirfad ahaan farsamo yaqaan qalliinka, waxaad u baahan tahay inaad kasbato shahaadada jaamacadeed ama kan koowaad. Celceliska mushaharku waa $ 56,310 sanadkii.
15. Kalkaaliyaha Diiwaangashan
Kalkaaliyeyaashu waa qayb weyn oo ka mid ah xarun caafimaad waxayna si dhow ula shaqeeyaan dhakhtarka takhasuska leh. Si aad u noqoto kalkaaliye caafimaad oo diiwaangashan waa inaad haysataa shati-gaar ah oo gobolka ku takhasusay, dibloomada dugsiga sare, iyo dibloomada waxbarashada dugsiga sare kadib oo la doorbido shahaadada koowaad.
Kalkaaliye caafimaad ahaan diiwaangashan ahaan, waxaad mas'uul ka noqon doontaa hubinta calaamadaha muhiimka ah ee bukaanka, gelinta iyo bilaabida daaweynta xididka, nadiifinta nabarrada iyo beddelidda faashadda, iyo inaad dhakhaatiirta la socodsiiso xaaladda bukaanka.
Celceliska mushaarka sanadlaha waa $ 55,030
16. Khabiirka Codaynta Caafimaadka
Khabiirada koodhka caafimaadka waa shaqsiyaadka ka shaqeeya waaxda biilasha ee xarumaha daryeelka caafimaadka sida rugaha caafimaadka, isbitaalada, guryaha dadka waaweyn lagu xannaaneeyo, goobaha dhaqan celinta, iyo kuwa kale. Waad laadi kartaa shaqo bilow ah arimahan adiga oo dhameystiraya barnaamijka tababarka iyo helitaanka shahaadada ama shahaadada wadajirka ah.
Mas'uuliyadaha waxaa ka mid ah kala-saarista iyo diiwaangelinta ciladaha, daaweynta, iyo habraacyada biilka iyo lacag-celinta shirkadaha caymiska caafimaadka.
Celceliska mushaarka sanadlaha ah waa $ 45,947 sanadkii
17. Maamulaha Daryeelka Caafimaadka
Maamulaha daryeelka caafimaadku waa mid ka mid ah shaqooyinka caafimaad ee ugu mushaharka badan iskuulaad yar, isagoo siiya shaqsiyaadka ku jira gudaha mushahar celcelis ahaan $ 66,000 sanadkii. Ka shaqeynta booskan shaqadu kuma siinayso inaad wax badan la macaamisho bukaanka, halkii, waxaad maamuli lahayd maaliyadda iyo maaraynta shaqaalaha xarunta caafimaadka.
Waxaad sidoo kale masuul ka noqon doontaa xafidaada diiwaanada caafimaadka iyo maamulka, kormeerida shaqaalaha, raacida sharciyada daryeelka caafimaadka iyo qawaaniinta dhamaan qeybaha, iyo inaad jadwal shaqo u sameysid shaqaalaha.
18. Kaaliyaha Caafimaadka Guryaha
Haddii aadan jeclayn fikradda ah inaad ka shaqeyso isbitaal oo aad weli rabto inaad ku lug yeelato warshadaha daryeelka caafimaadka waxaad tixgelin kartaa inaad u shaqeyso sidii caawiye caafimaad oo guri ah. Waa mid ka mid ah shaqooyinka caafimaad ee ugu mushaharka badan iskuulo yar, halkaas oo aad ka dhigi karto mushahar celcelis ahaan $ 32,000 sanadkiiba.
Kaaliyaha caafimaadka guriga, waxaad la shaqeyn doontaa bukaanada waayeelka ah, kuwa naafada ah, waxaadna ka caawin doontaa bukaanada dhibaatooyinka nafaqada iyo daryeelka shakhsi ahaaneed. Guud ahaan, waxaad tahay daryeel bixiye guri oo caawiya oo nolosha u fududeeya dadka.
19. Farsamo yaqaan Macluumaadka Caafimaadka
Farsamo yaqaan macluumaadka caafimaadka ayaa ah mid ka mid ah shaqooyinka caafimaad ee ugu mushaharka badan iskuulaad yar isla markaana waajibaadka aasaasiga ah ay ka mid yihiin maareynta iyo abaabulka daryeelka caafimaadka iyo xogta caafimaadka iyadoo la hubinayo saxsanaanta, marin u helka, tayada, iyo amniga macluumaadka caafimaad ee nidaamyada dhijitaalka ah iyo daabacaadda.
Waxaad ku soo geli kartaa goobtan shahaadada jaamacadeed waxaadna ka shaqeyn kartaa xarumaha caafimaadka, isbitaalada, iyo xarumaha kale ee daryeelka caafimaadka. Celceliska mushaharku waa $ 47,861 sanadkii.
Ahaanshaha nafaqo-yaqaan waxay kaa kasban kartaa mushahar celcelis ahaan ah $ 53,039 sanadkiiba waxaadna ku geli kartaa berrinka shahaadada isku-xidhka ah. Khabiiro nafaqo leh, waxaad bukaanada ka caawin doontaa qorshaynta iyo ku darida caadooyinka cunida caafimaadka leh si ay u taageeraan caafimaadka iyo caafimaadka.
Waxaad sidoo kale ka caawin doontaa bukaanada sonkorowga qaba iyo dadka qaba xasaasiyadda cuntada inay qorsheeyaan cuntada ay cunayaan.
Kuwani waa shaqooyinka caafimaad ee ugu mushaharka badan iskuulo yar oo aad ubaahantahay inaad ka fikirto inaad aadeyso, way dhaqso badanyihiin, wayna ka jaban yihiin, waxayna la yimaadaan mushaar fiican marki laguu aqoonsado. Ka codso kulleejooyinka bulshada mid ka mid ah barnaamijyadan maadaama ay iyagu siinayaan wax badan.
Liistada Dugsiyada Caafimaadka ee Kanada oo dhameystiran iyo faahfaahintooda
shaqooyinka caafimaad ee ugu mushaharka badan iskool yar
Previous Post:Shaqooyinka ugu Lacagta Badan 45 ee Kaalifoorniya
Post Next:5 Talaabo oo lagu helo Khadka Tooska ah ee Aroosyada